ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “အောချာ့ဒ်က အနီရောင်လှိုင်းလုံး”
ရဲရဲနီမြန်မာတွေအတွက်ဂုဏ်ယူတယ,်,,,အားကျိုးမာန်တက်အပင်ပန်းခဲ့တဲ့လုပ်အားပေးတွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်,,ံဒီပွဲမှာလျို့ဝှက်မဲမှန်းသိသိကြီးနဲ့သွေးကြောင်တဲ့သူတွေတွေ့လိုက်ရတော့ သူတို့အစားကျူပ်တော့ရှက်တယ်,,,အဝေးမှာရောက်နေတယ်ဆိုပြီး မဆိုင်သလိုနေအတ္တကြီးတဲ့သူတွေတွေ့ရတော့စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ,,,
ဓါတ်ပုံတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုပေါရေ့.....
အမတို့တောင် အားပေးဖို့ဆိုပြီး ထပ်လာဦးမလို့.....မလာဖြစ်လိုက်တာ။
ဓာတ်ပုံတွေလာကြည့်သွားတယ်ကိုပေါ.. မြန်မာပြည်အတွက် ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ ပြောင်းလဲမှုပေးနိုင်မလဲမသိပေမယ့် စင်္ကာပူအတွက်တော့ စာမျက်နှာအသစ် ရေးပေးလိုက်တာပဲ။
MM Embassy extend the polling3more days.
30th April, 1st May( May Day ) and 2nd May.
Thnks to the sea of red Burmese in Singapore.